विशेष | Samaj Khabar
काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन सकिएसंगै आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनको चर्चा यतिबेला चुलिएको छ । स्थानीय तहको नि...
काठमाडौं । संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरी...
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो बर्षको दशैंमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।...
काठमाडौं । २९ महिनाअघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरा पुननिर्माणको जिम्मा लिएको नेपाल टेलिकमले पुननिर्माणबाट हात...
प्रदिपका विरुद्ध कसले गर्दैछ षड्यन्त्र ? जापान घटनाको सत्यतथ्य यस्तो छ….
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले जनसम्पर्क समितिको कार्यक्रममा सहभागि हुन जापान जान...
जम्बो मन्त्रिमण्डल गिनिज बुकको नजिक !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आलोचनाकै बीच छैटौं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । यसअघि पाच...
सुन तस्करको स्वर्णभूमि बन्दै नेपाल, ५ बर्षमा चारसय किलो सुन बरामद
काठमाडौं । नेपाल सुन तस्करहरुका लागि स्वर्णभूमि बन्दै गएको छ । पछिल्लो पाँच बर्षमा मुलुकमा तस्करीका लागि ल्याइ...
काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन सकिएसंगै आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनको चर्चा यतिबेला चुलिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम...	Read more
काठमाडौं । संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरी कानुन बनाउने तयारी हुँदै छ । सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा घुमाउरो भाषामा यस्...	Read more
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो बर्षको दशैंमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । देशमा बाढी पहिरोको कारण दुख परेको अवस्थामा आफ्नो परिवारबाहेक अन्यलाई टीका लगाउन...	Read more
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले जनसम्पर्क समितिको कार्यक्रममा सहभागि हुन जापान जाने क्रममा भएको घटनाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली युव...	Read more
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आलोचनाकै बीच छैटौं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । यसअघि पाचौं पटकसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी ५४ सदस्यीय पुर्याएका देउवामाथि जम्बो मन्त्री...	Read more
काठमाडौं । नेपाल सुन तस्करहरुका लागि स्वर्णभूमि बन्दै गएको छ । पछिल्लो पाँच बर्षमा मुलुकमा तस्करीका लागि ल्याइँदै गरेको सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन बरामद भएको छ । दैनिक एक सय किलो सुन त...	Read more
सरकारका उपप्रधानमन्त्री नै निर्वाचन आचारसहिंताको विरुद्धमा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनु ३ महिना पहिले नै आचारसंहिता लगाएको भन्दै उपप्रधानमन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाएको छ । उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय...	Read more
नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक महत्वका ३ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौं । चिनियाँ लगानी नेपाल भित्र्याउने लगायत तीन बुँदे सहमति पत्रमा नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेको चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेतृत्व...	Read more
दाउन्नेमा फेरि पहिलो, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
नवलपरासी । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्ने सडकखण्ड गए रातिदेखि पुनः अवरुद्ध भएको छ । दाउन्ने सडकखण्डको बीच भागमा मालवाहक ट्रक फसेका कारण सवारी आवागमन ठप्प भएको नवलपरासीका प्...	Read more